नशा रोगले थलिएकी पर्वतको थापाठानाकी यमकुमारीलाई उपचारका लागि आर्थिक समस्या - News site from Nepal
नशा रोगले थलिएकी पर्वतको थापाठानाकी यमकुमारीलाई उपचारका लागि आर्थिक समस्या
पर्वत- पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नं. २ थापाठानाकी ४५ वर्षिया महिला यमकुमारी थापा बिगत लामो समयदेखि नसा सम्बन्धि रोगबाट ग्रसित बनेकी छिन् ।
नेपालका विभिन्न अस्पतालहरुमा पुगेर उपचार गरेपनि रोग पत्ता नलाग्नुका साथै निको नभएपछि थप उपचारका लागि आर्थिक समस्या परेको छ । अहिले उनि घरमै जीवन मरणको दोसाँधमा रहेकी छिन् ।
विपन्न परिवारकी यमकुमारीका श्रीमान जीवलाल थापा मगर गाउँमै मजदुरी पेशा गर्दै आएका छन् । अन्य आर्थिक श्रोत नभएकाले दैनिक औषधी सेवन र थप उपचारका लागि अस्पताल जान रकम अभाव भएको यमकुमारीका श्रीमान जीवनलालले बताए । उनले भने पैसा नभएकाले राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि लैजान सकिएन ।
उनले श्रीमतीको जीवन बचाइदिन अपिल गरेका छन् । अहिलेसम्म उपचारका लागि दश लाख रुपैया भन्दा बढि खर्च भैरहेको छ । अझै कति खर्च लाग्छ भन्ने अनिश्चत भएकाले पनि सहयोगी महानुभावहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्न उनले अपिल गरेका छन् ।
उनको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । यमकुमारी थापाको उपचारका लागि सहयोग गर्न चाहानेहरुले उनका श्रीमान जिबलाल थापा मगरको नाममा मुक्तिनाथ विकास बैंकमा रहेको खाता नं. ०२१२०१००१११६१६०००००१ वा मोबाइल नं. ९८४३१७२३५१, ९८४६८५३४५७ जित बहादुर थापालाई ९८४७६४६९४५ मा सम्पर्क गरि सहयोग गर्न सकिने भएको छ । ‘तपाई हाम्रो थोरै सहयोगले कसैको जीवन बच्न सक्छ’ त्यसैले सहयोगका लागि हामीपनि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।